Sunburn နေလောင်ခံရရင် ဘာလုပ်မလဲ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Sunburn နေလောင်ခံရရင် ဘာလုပ်မလဲ
1. နေလောင်တဲ့နေရာကို အေးတာကပ်ပေးပါ။ ရေအေး + ရေခဲ။
2. ရေအေးနဲ့ရေချိုးပါ။ ရေထဲမှာ ဗနီဂါရည်တခွက်ပါထည့်ချိုးတာကောင်းတယ်။ အုတ်စပါးလည်းထည့်လို့ရတယ်။ ရေထဲဆော်ဒါမှုံ့ထည့်တာလည်းကောင်းတယ်။
3. သခွါးသီးလည်းကောင်းတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်လည်းလိမ်းကြတယ်။
4. Lidocaine ပါတာလိမ်းရင် ထုံဆေးဖြစ်လို့ နာနေတာသက်သာမယ်။
5. 1% hydrocortisone cream လိမ်းဆေးကို တပါတ်ကြာလိမ်းပါ။ နားထားပြီး လိုသေးရင် ထပ်လိမ်းပါ။
6. ibuprofen (Advil, Motrin) နဲ့ naproxen (Aleve) စားဆေးကနေ နာနေ ရောင်နေတာသက်သာစေမယ်။
7. နွားနို့ခပ်အေးအေးလိမ်းနိုင်တယ်။ သိပ်အေးတာမဟုတ်ပါ။ ရောဂတ် (ဒိန်ချဉ်ခဲ) လည်းကောင်းတယ်။
8. ဗီတာမင် (အီး) အဆီ လိမ်းနိုင်တယ်။ သောက်လည်းကောင်းတယ်။
9. အေးနေတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ရည်လည်းကောင်းတယ်။ tannic acid ပါလို့ဖြစ်တယ်။
10. Aluminum acetate ပေါင်ဒါပါတဲ့ဆေးဆိုရင် ယားတာသက်သာစေမယ်။
11. ဆပ်ပြာသုံးတာ ခဏရှောင်ထားပါ။
12. နေရောင်ထဲမထွက်ခင် Sunscreen ကိုမိနစ် ၃ဝ ကြိုလိမ်းထားပါ။ Sun protection factor (SPF) 15 နဲ့ 30 ရှိတာကောင်းတယ်။
13. ရေပိုသောက်ပါ။ အရည်ရွှမ်းအသီးတွေစားပါ။
14. နောက်ထပ်နေလောင်မခံပါနဲ့။ နေလောင်တာမဟုတ်ပဲ အလာဂျီသဘောဆိုရင် Calamine lotion လိမ်းပါ။
15. အပူဖုပေါက်လာရင် မဖေါက်ပါနဲ့။ ပေါက်သွားရင်တော့ အပ်ါယံကွာသွားတာလေးကို ပြန်ကပ်ထားပေးပါ။ ပတ်တီးထက်ကောင်းတယ်။ ရှေးဦးသူနာပြု အပျော့စားပိုးသေဆေးတခုခု လိမ်းထားပါ။